Akụkọ - Charging Alliance: 4,173 ọhụrụ na-akwụ ụgwọ ọha na-agbakwunye na Mee, elu 59.5% kwa afọ
Charging Alliance: 4,173 ọhụrụ na-akwụ ụgwọ ọha na eze agbakwunyere na May, elu 59.5% kwa afọ
Na June 11, data nke China Charging Union wepụtara gosiri na site na Mee 2018, ndị otu nọ na njikọ ahụ gosipụtara mkpokọta 266,231 na-akwụ ụgwọ ọha na eze, site na ndị otu mmekorita ahụ, e jiri 441,422 hụ ụgbọ ndị ahụ. mpempe ozi data. A ngụkọta nke ihe 708,000 odori ikpo e ji.
N'ihe banyere ikpo oku nke ọha, enwere ihe mkpuchi 116761 AC, 84174 DC na-akwụ ụgwọ, yana 65296 AC na DC jikọtara ikpo. Na Mee 2018, 4,173 ụdị ụdị ọhaneze agbakwunyere karịa Eprel 2018. Site na Mee 2017 ruo Eprel 2018, a na-agbakwunye mkpokọta ụdị ụtụ mmadụ 8,273 kwa ọnwa, yana n’ọnwa Mee nke 2018, uto a bụ 59.5%.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ buru ibu na mba ahụ ruru 16 (ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ nkwụ ụgwọ> = 1000), ikike pụrụ iche bụ nke mbụ. A wuru ikpo ọkụ 110,857, Grid State na 56,549 na-akwụ ụgwọ.
Ugboro iri na-akwụ ụgwọ ọha na mpaghara mpaghara mpaghara bụ: 40,663 na Beijing, 34,313 na Shanghai, 32,701 na Guangdong, 27,586 na Jiangsu, 20,316 na Shandong, 12,759 na Zhejiang, 11,555 na Tianjin, na 11,232 na Hebei. , 10,757 na Anhui na 7,527 na Hubei.
Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ọha na eze na mpaghara, mpaghara na obodo na-arịwanye elu n'oge na-adịghị anya, ọnụ ọgụgụ nke ọkụ eletrik arịwanye elu ntakịrị, nke bụ otu ọnwa gara aga
Ike ịkwụ ụgwọ mba na-elekwasị anya na Pearl River Delta, Yangtze River Delta na mpaghara etiti na ọdịda anyanwụ. A na-ejikarị ụgbọ ala ndị njem na-achịkwa Beijing; ọkụ eletrik na Guangdong, Shaanxi, Jiangsu, Shandong, Hubei, Sichuan na Fujian bụ bọs. A na-ejikarị ụgbọ ala pụrụ iche eme ihe, gbakwunyere ụgbọ ala ndị njem; Mmiri ọkụ eletrik nke Shanxi na-adabere n'ụgbọ tagzi, nke ụgbọala ndị njem gbakwunyere. Ike oriri nke ụgbọ ala pụrụ iche dịka ụgbọ ala eletriki na mgbazinye doro anya.
Tengbè iri na obodo iri kachasị elu na ikike ịgbanye ikike nwere oriri ọkụ na mpaghara asatọ na obodo kachasị site na bọs na tagzi. N'ime ha, Guangdong Province butere ụzọ na 320.29 nde kWh.
Site na May 2018, site na ndị otu njikọta nke ndị na-emepụta ụgbọ (BYD, SAIC, BAIC, Jianghuai, Tesla, Changan, Geely, Chery, Dongfeng Electric, Dongfeng Nissan, Guangzhou Automobile, FAW, Zhidou) ihe atụ data Ihe omuma a di 441,422, na ọnụọgụ nke ikpo ọkụ na-adaghị adaba bụ 31.04%. N'etiti ha, oke nke ihe nkwụnye ụgwọ nke enweghị ike iwu n'ihi "ndị ọrụ otu na-ewu mkpokọta nke ha" bụ 16,27%, nke adabaghị n'ihi "ihe onwunwe nke ebe obibi ahụ anaghị arụkọ ọrụ". Onu ogugu nke ihe eji wuo bu 4,75%. Onu ogugu nke ugwo na-adighi ike wuo n'ihi "enweghi ebe nkpuchi edozi n'ime ebe obibi" bu 2.56%. Onu ogugu nke ugwo na-adighi ike wuo n'ihi "ichota site na ebe ndi raara onwe ha nye" bu 2.60. %, n'ihi eziokwu ahụ bụ na "enweghị ebe a na-adọba ụgbọala na-arụ ọrụ", ọnụọgụ nke ikpo ọkụ na-enweghị ike iwu bụ 0,7%. Onu ogugu nke ugwo ugwo nke enweghi ike iwuli n'ihi "ihe isi ike ichikota oku na ebe obibi" bu 0,17%.